Onye na-emepụta ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ kwụsị ịkwado ya na ihe ndị na-agba agba
Home / PWHT Machine / Itinye aka n'ọkụ Heating Fitting Shafts and Bear
Category: PWHT Machine Tags: Mgbaghara na-adaba adaba, Na-agba ọsọ nke ọma, Na-agba ọsọ kwesịrị ekwesị, Kwụsị ihe ndị kwesịrị ekwesị, Kwụsị usoro kwesịrị ekwesị, Na-agbapụ eriri kwesịrị ekwesị
Onye ndu nke Ngwongwo Ngwá Agha Ngwá Ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ọkpụkpụ na-ada mbà, na-eme ka ọ daa mbà.
Usoro nke MYD nke usoro ikpo ọkụ na-emepụta iji mee ka ọkpụkpụ na ihe ndị na-agbapụta ụkwụ na-eme ka ọ dị mma, ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ ọkụ.
Nchịkwa ọwa 6 Onye na-ede ihe ndekọ 10 Nha nha: 120kg Ebu ibu na akụkụ: 155-260kg
Isi akụkụ Ngwunye ụba K Kpọtụrụ R-1006 Okpomọkụ na-edekọ
Uzo kpo oku oku
N'iji ya tụnyere ihe na-enye nsogbu na mgbakasị na-enye nsogbu, nkwụnye ọkụ na-enye ọtụtụ uru, gụnyere ịdị mma nke ikpo ọkụ na àgwà, oge mgbanwo dị ala, na ihe ndị dị ala na-akwụ ụgwọ. Igwe ọkụ na - ekpo ọkụ dịkwa nchebe, a pụrụ ịdabere na ọ dị mfe iji ya, ma dị elu karịa teknụzụ ndị ọzọ .inyere ike na ntụgharị.
Atụmatụ nke usoro ntinye nke DSP
• Ikuku jụrụ oyi: Ọ dị mma iji wụnye.
• Okpomọkụ na-edekọ: Recdekọ usoro kpo oku dum ma bipụta ya
• Ngwunye mkpuchi dị nro: Ọ dị mfe ikuku na mpempe akwụkwọ dị iche iche.
• Onye na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ: Debe usoro kpo oku otu ihe ahụ PWHT chọrọ.
• PLC emetụ ihuenyo: Intuitive ịhụ na mfe iji rụọ ọrụ.
• Ngwunye ike ikpo ọkụ: heatinggba ọkụ ọkụ ọkụ na arụmọrụ ọkụ, ike ọkụ eletrik
• Ngwa ngwa kpo oku. Nwere ike iru 300 ogo C n'ime 10 Min. Chekwaa oge ikpo ọkụ
• Ichekwa Ike Eletriki: Nwere ike ịchekwa ihe karịrị ike 50% iji tụnyere ike ọkụ na ụzọ eji arụ ọrụ
Ngwa na isi na-eji ubi
Usoro MYD na-emepụta usoro oku na-ekpo ọkụ bụ ikuku ikuku na-eme ka ikuku ihe ọkụkụ na usoro DSP. Ngwa ha kachasị mkpa bụ ikpo ọkụ ọkụ, ikpo ọkụ nke ọkụ ọkụ, ọgwụgwọ okpomọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ, nchekasị, mgbakwunye, wdg.
Ngwakọta kpo oku, Na-agba ọsọ kwesịrị ekwesị
Weld na-agbanye ọgwụgwọ, Ọgwụgwọ mkpuchi welded Post-weld, Nchekwa nsogbu, Mgbakwunye
Ndị ọrụ a gụnyere petrochemical, mmanụ na gas pipelines, ụgbọelu, ụgbọ mmiri, ígwè, chaile, ụgbọ mmiri na-ebugharị, ụgbọ mmiri, ngwongwo ígwè, ọkpụkpụ ụgbọ mmiri, okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè, mmiri eletrik, mwube m, ọrụ ụgbọ ala, ike nuklia, mining, plastics processing.
Ngwunye ọkụ ọrụ gụnyere
1. Ntinye ike ikpo oku
2. Ntughari ntinye (Ntughari ntinye aka) ma obu (Soft induction coil)
3. Njikọ njikọ maka adaba iji jikọta eriri igwe na ike kpo oku
4. Onye na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ
5. PLC ihuenyo mmetụ
6. Okpomọkụ na-edekọ ihe na ngwa nbipute
7. K pịnyere thermocouple & eriri njikọ
8. mkpuchi blanket
9. Na akuku ozo.
1. K ụdị thermocouple
3. Mkpuchi mkpuchi
4. Ya mere na